Ukutshintsha kwematriki: inkcazo, iipropathi kunye nokuzilolonga exercises Discover Discover online ▷ ➡️
I-matrix transpose A yi-matrix enezinto ezifanayo ne-A, kodwa ibekwe kwindawo eyahlukileyo. Ifunyanwa ngokuhambisa izinto zemigca ukusuka ku-A ukuya kwiikholamu zotshintsho ngendlela enocwangco.
Ke ngoko, unikwe matrix A = (theij)mxn Ukuhanjiswa kuka-A ngu-At = (a 'ji) nxm.
mna: indawo emgceni
j: indawo yekholamu
unijIsixhobo esikwindawo ij
m: Inani lemiqolo kwimatriki
n: inani leekholamu kwimatriki
Unt: ukuhambisa imatriki ka-A
Qaphela ukuba i-matrix A yeyoku-odola mxn, ngelixa i-transpose yayo engu-At Ye-odolo nx m.
Fumana imatriki yokuhambisa yematriki B.
Njengoko imatriki enikiweyo inguhlobo lwe-3 × 2 (imiqolo emi-3 kunye neekholamu ezi-2), ukutshintsha kwayo kuya kuba luhlobo 2 × 3 (2 imiqolo kunye neekholamu ezi-3).
Ukwakha i-matrix yokuhambisa, kufuneka sibhale zonke iikholamu zika-B njengemigca ka-Bt. Njengoko kubonisiwe kulo mzobo ulandelayo:
Ke ngoko, i-matrix yokudlulisa ka-B iya kuba:
bona kwakhona: Ukufika
1 Iipropathi zetranspose matrix
2 Imatriki ehambelanayo
3 Imatriki echaseneyo
4 Imatriki eguqulweyo
5 Ukuzivocavoca umzimba ngeempendulo
Iipropathi zetranspose matrix
(At)t = A: le propati ibonisa ukuba ukuhanjiswa kwematriki etshintshiweyo sisiseko sokuqala.
(A + B)t = At + BtIsambuku sokudityaniswa kwematriki ezimbini siyalingana nesixa sokutshintshwa komnye nomnye.
(A. B)t = Bt . unt: Ukutshintsha kokuphindaphindwa kwematriki ezimbini kulingana nemveliso yotshintsho nganye nganye, ngokulandelelana.
(M) = umz (MtUkumiselwa kwematriki eguqulweyo kuyafana nokuchazwa kwematriki yoqobo.
Imatriki ibizwa ngokuba lulingano xa, kuyo nayiphi na into ye matrix A, ukulingana aij = aji ewe
Imatriki zolu hlobo ziimatriki zesikwere, oko kukuthi, inani lemiqolo lilingana nenani leekholamu.
Imatriki nganye ehambelanayo iyanelisa ulwalamano olulandelayo:
Kubalulekile ukuba ungabhidanisi imatriki echaseneyo ne-transpose. Imatriki echaseneyo yenye equlathe izinto ezifanayo kwimiqolo nakwiikholamu, nangona kunjalo, ineempawu ezahlukileyo. Ke ngoko, isichasi se-B ngu-B.
I-matrix eguqulweyo (iboniswe linani -1) yenye imveliso yeematriki ezimbini ilingana nesazisi (mat) sodweliso olufanayo.
A. B = B. A = Mnan (xa imatriki B iguqukile kwimatriki A)
Ukuzivocavoca umzimba ngeempendulo
1. (Fei-SP) Ngenxa yematriki A =, apho uAt Ukutshintsha kwayo, ukumiselwa kwematriki A. At :
c) Ishumi elinambini
2. (FGV-SP) A no-B likomkhulu kunye no-At Ngaba i-transpose matrix ka-A. Ukuba, emva koko yi-matrix At . B ayizukusebenza:
c) x / y = -4
d) x. kwaye2 = -1
e) x / y = -8
3. (UFSM-RS) Ukwazi ukuba i-matrix
lilinganisa ukuhambisa, ixabiso le-2x + y ngu: